Shabelle Media Network – Gobolada dhexe oo maanta si siman looga wada ciiday
Gobolada dhexe oo maanta si siman looga wada ciiday
maalik_som August 19, 2012
Dhuusamareeb: (Sh. M. Network) Waxaa maanta si siman looga ciidan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Sheekh Axmed Ilka-Case, guddoomiye ku xiggeenka guddiga Fullinta ee Maamulka Ahlu Sunna Waljamaaca ee gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya oo waraysi siiyay saakay Idaacadda Shabelle ayaa waxa uu faah faahin ka bixiyay qaabka Munasabadda Ciiddul Fidiriga looga dareemayo gudaha Magaaladaasi. Guddoomiye ku xiggeenka ayaa waxa uu sheegay in Umadda Islaamka gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolada dhexe ay si wanaagsan u ciideyaan, wuxuuna sheegay in shacabka ay isaga marxabeynayaan Munaasabadda islamarkaana ay u kala dareereen Salaadda Ciidda.
Isagoo hadalkiisa wata ayaa waxa uu sheegay in Ciiddaani ay ka badalan tahay kuwii hore, maadaama horey dadka aysan si siman u Ciidi jirin, hase ahaatee Ciiddaani la dhameystay 30-ka Bisha Barakeysan ee Ramadaan, waxaana xusid mudan in shacabka guud ahaan meel waliba oo ay jooggaan ay u tamashleynayaan munaasabadda Ciidda.
Si kstaba gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa mararka qaar waxa ay ka dambeyn jireen kuwa kale, maadaama Maamulka Ahlu Sunna ee halkaasi ka taliya ay ku boorin jireen shacabka inaysan Ciid aheyn oo aysan dhamaanin Bisha Soon, hase ahaatee maanta si siman looga wada ciidayo gobolada dhexe Soomaaliya.
Guddiga dowladda ee Kismaayo tagay oo weli ku howlan wada tashiyo
Xukuumadda oo wada oo qorshe Lagu dhameynayo Khilaafka ka taagan Jubbooyinka
Wadi ka socda IGAD oo lagu wado in ay Gaaraan Kismaayo